पुनर्बीमा कम्पनीको आईपिओ खुल्यो, ७ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
पुनर्बीमा कम्पनीको आईपिओ खुल्यो, ७ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने
प्रकाशित मिति: ४ चैत्र २०७६, मंगलवार
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले मंगलवारदेखि आईपीओ निष्कासन गरेको छ ।
कम्पनीले १ करोड ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो । सोमध्ये ७३ हजार ५०० कित्ता कर्मचारीको लागि, ८ लाख कित्ता सामुहिक लगानी कोषको लागि र बाँकी रहेको १ करोड ५१ लाख २६ हजार ५०० कित्ता सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको छ ।
कूल ए१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको आईपिओमा आगामी चैत्र ४ गतेदेखि आवेदन भर्न पाइनेछ भने सम्भवतः चैत्र ७ गते नै बन्द हुनेछ । त्यसैले पुनर्बीमामा कम्पनीको आईपिओ भर्न चाहनेले अब तयारी सुरु गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक आह्वान गरिएको आईपिओमा १५ देखि २० लाख जनाले आवेदन दिने अनुमान गरिएको छ ।
बिक्रीप्रबन्धक आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङले शुक्रबार सार्वजनिक रुपमा आह्वान पत्र जारी गर्दै १०० रुपैयाँ अंकित एक करोड ६० लाख कित्ता प्राथमिक शेयर निष्काशन गरिएको जनाएको छ ।
सूचना अनुसार चैत्र ४ गतेदेखि खुल्ने आवेदन छिटोमा चैत्र ७ गते नै बन्द हुनेछ अर्थात जम्मा चार दिनमात्रै भर्न पाइनेछ भने ढिलोमा चैत्र १८ गते बन्द हुनेछ । चैत्र ७ गतेभित्र आह्वान गरिएको शेयर बराबरको प्रस्ताव नपरेमा मात्रै ढिलो मितिमा आवेदन दिन सक्ने सम्भावना रहेको आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङले जनाएको छ ।
उक्त आईपिओमा न्यूनतम १० कित्ता देखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने छ भने नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको सम्पूर्ण आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तीनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ । यसका अलावा मेरो शेयर सफ्टवेयरमार्फत अनलाईनबाट पनि आवेदन दिन सकिने कम्पनीद्वारा जारी सूचनामा जनाइएको छ ।
किशोरीहरुमाथि एसीड आक्रण गर्ने अपराधीलाई कार्बाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन
फागुन १४ । काठमाडौं,राजधानीको वसन्तपुरमा दुई किशोरीहरुमाथि एसीड खन्याउने अपराधीलाई अबिलम्ब पहिचान गरी […]
निर्मला हत्या प्रकरण : पिडित एकातिर प्रहरी अर्कैतिर
काठमाडौं । महेन्द्रनगरका झन्डै ३० नागरिकसँग निर्मला हत्याकाण्डका अन्तरकथा, ढिलासुस्ती र निराकरणबारे […]
राज्यबाट कस्तो सुविधा पाउँदै छन् पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखले?
कात्तिक १५ ।काठमाडौं, निवर्तमान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसहित अवकाशप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिलाई सरकारले […]
युवा संघका पूर्वकोषाध्यक्षद्वारा अध्यक्ष तिवारीको हत्या : प्रहरी
बुटवल। युवा संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्यामा युवा संघकै पूर्वनेता मनोज पुनको संलग्नता रहेको […]
कोदालोले हानेर भाइको हत्या
असोज १९ ।अर्घाखाँची,अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं १० किमडाँडा खालमा आफ्नै दाजुले भाइको हत्या गरेका […]
विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरुको सहयोगमा करिब २० करोड लागतमा काठमाण्डौको बालुवाटारमा बनाउन लागिएको एनआरएन […]
स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता रद्द, पाँच करोड रुपैयाँ धरौटी जफत